N'oge niile, dabere na ọdịbendị magburu onwe ya banyere omume, yirentang nọ na-eme mgbanwe na na-enyocha ngwaahịa dị elu na ngwaahịa mkpuchi siri ike mgbe niile, na-eduga usoro ejiji dị mma ma na-agbasi mbọ ike ịmepụta ahụ ike.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ price list, biko hapụ gị e-mail anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Kemgbe e guzobere ya, Yirentang ararala onwe ya nye ihe kpatara nlekọta ịhụnanya na ahụike dabere na ụkpụrụ azụmaahịa nke "iburu omume ọma na obi ọma n'uche, ịzụlite ahụ, na ime omume ọma". Ihe nkpuchi KS-9005 nke Yirentang mepụtara gafere ule niile nke GB2626-2006, GB2626-2019 na ụkpụrụ EU nke EN149: 2001 + A1: 2009. Emeputara akwukwo CE ma gbaara ya aka site na SGS na ISO-9001-2015 ..
N'oge na-adịbeghị anya, anyị niile na-azụta ihe nkpuchi. Anyị anakọtara ụfọdụ ozi ebe a Ihe dị iche n’etiti mkpuchi mkpuchi ahụike, nkpuchi N95 na nkpuchi KN95 1. Mkpuchi mkpuchi ọgwụ: n’ahịrị China GB 19083-2010 iwu chọrọ, filtration arụmọrụ ≥ 95% (anwale na-abụghị mmanu mmanu ahụ). Ọ bụ re ...
Ọ bụ ezie na akwụkwọ coronavirus oria na e oru, ahịa usoro iwu ọchịchị na-eji ọkụ na mkpakọrịta na niile etoju akpọwo azụmahịa iguzosi ike n'ezi na-erube isi iwu. Agbanyeghị, a ka nwere ọtụtụ azụmaahịa na-enweghị isi megide ikuku ma na-ere ihe nkpuchi adịgboroja iji were ...